BAOLINA KITRA – CAN 2019 :: Nahatafita an’i Ghana sy Kenya ny sazy azon’i Sierra Leone • AoRaha
BAOLINA KITRA – CAN 2019 Nahatafita an’i Ghana sy Kenya ny sazy azon’i Sierra Leone
Naaton’ny Kaonfederasiona afrikanina ho an’ny taranja baolina kitra ny fandraisana anjaran’i Sierra Leone amin’ny fifanintsanana hiatrehana ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019. Tsy nanambara ny antony nanasaziana azy ireo ity rafitra mifehy ny baolina kitra afrikanina ity fa raha ny fantatra dia ny sazy fampiatoana nomen’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) tamin’ny fitsabahan’ny fanjakana tamin’ny raharahan’ny Federasiona tany an-toerana no mety ho antony.
Nambaran’ny fanjakana tany an-toerana fa nanao kolikoly sy sarisarin-dalao ary fitantanana tsy nahomby ny filohan’ny Federasionan’i Sierra Leone sy ny sekretera
jeneraliny ka nahatonga ny firotsahan’ny Fifa an-tsehatra.
Vokatr’izany dia tafita avy hatrany hiatrika ny CAN 2019 i Ghana sy Kenya, izay niray vondrona tamin’izy ireo. Nofoanan’ny CAF avokoa ny vokatry ny fihaonana tamin’ity ekipa ity, teo amin’ny lalaom-bondrona. Mitarika vonjimaika eo amin’ny vondrona F misy azy ireo, taorian’ny nanesorana an’i Sierra Leone, i Kenya (isa 7), arahin’i Ghana (isa 6) ary Etiopia (isa 1). Ity farany anefa dia nandresy an’i Sierra Leone, tamin’ny lalao miverina (1 – 0). Resy tamin’ny isa 3 noho 1 kosa i Kenya nanoloana an’i Sierra Leone. Ireo lalao roa ireo ihany no vitan’izy ireo talohan’ny fanasazian’ny Fifa.
Isan’ireo firenena tsy maintsy miady mafy ny ho tafita ihany koa i Caméroun, taorian’ny nanesoran’ny CAF azy ireo tsy hampiantrano an’ ity hetsika kaontinantaly ity. Miankina amin’ny lalaon’izy ireo sy Kaomôro, amin’ny 22 marsa 2019, ny mety hahatafita azy ireo na tsia. Mila mitady fandresena ny Liona tsy voabaiko, raha te ho isan’ireo firenena tafita.
RAHARAHA ANTANIMENA :: Mitohy ny famotorana tamin’ilay fikasihan-tanana mpisolovava